UnionPay ကဒ် ငွေလဲလှယ်နှုန်း သိရှိရန် စုံစမ်းမေးမြန်းလာခြင်းကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆို ပါသည်။
ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် UnionPay စနစ်မှ ရယူထားခြင်း ဖြစ် သည်။ UnionPay စနစ်မှ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် လိုင်းအများစုနှင့် ဈေးကွက်အခြေခံမူများမှ ရယူ ထားသည့် အခြေခံ ငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြစ်သည်။ ကဒ်ထုတ်ပေးသည့်ဘဏ်မှ ထပ်ဆောင်း ကောက်ခံ သည့် အခကြေးငွေနှင့် အစွန်းထွက်ပမာဏ စသည့်အကြောင်းအရင်းများ၏ သက်ရောက်မှုများ မပါဝင်ပါ (အကယ်၍ ရှိခဲ့လျှင်)။.
UnionPay ကဒ် ငွေသွင်းငွေထုတ်ခြင်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်သည့်နေ့၏ ငွေလဲလှယ်နှုန်းအရ အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။ သို့သော် အထူးအခြေအနေတွင် ငွေသွင်းငွေထုတ် ငွေချေသည့်နေ့၏ ငွေလဲလှယ်နှုန်း အသုံးပြုရန် သင့်တော်သည်။ ( မှတ်ချက်- ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ် သည့်နေ့ဆိုသည်မှာ ငွေသွင်းငွေထုတ် အမှန်တကယ် ပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲဖြစ်သည်။ ငွေချေသည့်နေ့ ဆိုသည်မှာ UnionPay နှင့် ကဒ်ထုတ်ပေးသည့်ဘဏ်၊ ပြေစာရရှိသည့်ဘဏ်များမှ ငွေကြေးတွက်ချက် ပေးချေသည့် နေ့စွဲဖြစ်သည်။).
UnionPay စနစ် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို တနင်္လာမှ သောကြာနေ့အထိ နေ့စဉ် update လုပ်ပါတယ်။ စနေနှင့် တနင်္ဂနွေတွင် သောကြာနေ့၏ ငွေလဲလှုယ်နှုန်းကို ဆက်လက်အသုံးပြုသည်။ အထူး အခြေအနေ မရှိလျှင် အချို့ ဥရောပငွေကြေး ငွေလဲလှယ်နှုန်း အကျုံးဝင်သည့်အချိန်မှာ ပီကင်းမြို့ အချိန် 16:30 ဖြစ်သည်။ အခြား ငွေကြေး လဲလှယ်နှုန်း အကျုံးဝင်သည့် အချိန်မှာ ပီကင်းမြို့အချိန် 11:00 ဖြစ်သည်။ အထူးသတိပေးချက်မှာ ဤ၀က်ဘ်ဆိုက် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွင် ဖော်ပြထားသောငွေ လဲလှယ်နှုန်း update အချိန်သည် အထက်ဖော်ပြပါ အကျုံးဝင်သည့် အချိန်ထက် နောက်ကျနိုင်သည်။.)
ကဒ်ကောင်ဆောင်သူသည် ငွေသွင်း ငွေထုတ်နှုန်းကို ပိုမိုအသေးစိတ်ကျစွာ သိရှိလိုလျှင်၊ ကဒ်ထုတ်ပေးသည့် ဘဏ်သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။.
*အထက်ပါ အချက်အလက်များမှာ ကိုးကားလေ့လာရန် အတွက်သာဖြစ်သည်။.
ငွေနှုတ်ယူသည့်ငွေကြေးအမျိုးအစား AUD, Australian Dollar CAD, Canadian Dollar CNY, Yuan Renminbi EUR, Euro GBP, Pound Sterling HKD, Hong Kong Dollar JPY, Yen MOP, Pataca NZD, New Zealand Dollar SGD, Singapore Dollar THB, Baht USD, U.S.Dollar
ငွေပေးငွေယူဆောင်ရွက်သည့် ငွေကြေးအမျိုးအစား USD, U.S.Dollar AED, U.A.E. Dirham AFN, Afghani ALL, Albanian Lek AMD, Armenian Dram ANG, Netherlands Antillian Guilder AOA, Kwanza ARS, Argentine Peso AUD, Australian Dollar AWG, Aruban Guilder AZN, Azerbaijanian Manat BAM, Convertible Mark BBD, Barbados Dollar BDT, Taka BGN, Bulgarian Lev BHD, Bahraini Dinar BIF, Burundi Franc BMD, Bermudian Dollar BND, Brunei Dollar BOB, Boliviano BRL, Brazilian Real BSD, Bahamian Dollar BTN, Ngultrum BWP, Pula BYN, Belarusian Ruble BYR, Belarussian Ruble BZD, Belize Dollar CAD, Canadian Dollar CDF, Franc Congolais CHF, Swiss Franc CLP, Chilean Peso CNY, Yuan Renminbi COP, Colombian Peso CRC, Costa Rican Colon CUC, Cuban Conv Peso CVE, Cape Verdi Escudo CZK, Czech Koruna DJF, Djibouti Franc DKK, Danish Krone DOP, Dominican Peso DZD, Algerian Dinar EGP, Egyptian Pound ERN, Nafka ETB, Ethiopian Birr EUR, Euro FJD, Fiji Dollar FKP, Falkland Islands Pound GBP, Pound Sterling GEL, Lari GHS, Cedi GIP, Gibraltar Pound GMD, Dalasi GNF, Guinea Franc GTQ, Guatemala Quetzal GYD, Guyanese Dollar HKD, Hong Kong Dollar HNL, Honduras Lempira HRK, Croatia Kuna HTG, Haitian Gourde HUF, Forint IDR, Rupiah ILS, New Israeli Sheqel INR, Indian Rupee IQD, Iraqi Dinar IRR, Iranian Rial ISK, Iceland Krona JMD, Jamaican Dollar JOD, Jordanian Dinar JPY, Yen KES, Kenyan Shilling KGS, Som KHR, Cambodia Riel KMF, Comoro Franc KRW, Won KWD, Kuwaiti Dinar KYD, Cayman Islands Dollar KZT, Tenge LAK, Kip LBP, Lebanese Pound LKR, Sri Lanka Rupee LRD, Liberian Dollar LSL, Loti LTL, Lithunianian Litas LYD, Libyan Dinar MAD, Moroccan Dirham MDL, Moldovia Leu MGA, Malagasy Ariary MKD, Denar MMK, Myanmar Kyat MNT, Tugrik MOP, Pataca MRO, Ouguiya MRU, Ouguiya(new) MUR, Mauritius Rupee MVR, Rufiyaa MWK, Kwacha MXN, Mexican Peso MYR, Malaysian Ringgit MZN, Metical NAD, Dollar NGN, Naira NIO, Nicaragua Cordoba Oro NOK, Norwegian Krone NPR, Nepalese Rupee NZD, New Zealand Dollar OMR, Rial Omani PAB, Panamanian Balboa PEN, Nuevo Sol PGK, Kina PHP, Philippine Peso PKR, Pakistan Rupee PLN, Zloty PYG, Paraguay Guarani QAR, Qatari Rial RON, LEU RSD, Serbian Dinar RUB, Russian Ruble RWF, Rwanda Franc SAR, Saudi Riyal SBD, Solomon Islands Dollar SCR, Seychelles Rupee SDG, Sudanese Pound SEK, Swedish Krona SGD, Singapore Dollar SHP, St. Helena Pound SLL, Leone SOS, Somalia Shilling SRD, Suriname Dollar SSP, South Sudanese Pound STD, Dobra SVC, El Salvador Colón SYP, Syrian Pound SZL, Lilangeni THB, Baht TJS, Somoni TMT, New Manat TND, Tunisian Dinar TOP, Pa'anga TRY, Turkish Lira TTD, Trinidad & Tobago Dollar TWD, New Taiwan Dollar TZS, Tanzanian Shilling UAH, Ukrainian Hryvnia UGX, Uganda Shilling USD, U.S.Dollar UYU, Peso Uruguayo UZS, Uzbekistan Sum VEF, Bolivar Fuerte VES, Bolívar Soberano VND, Dong VUV, Vatu WST, Tala XAF, CFA Franc BEAC XCD, East Carribean Dollar XOF, CFA Franc BCEAO XPF, CFP Franc YER, Yemeni Rial ZAR, Rand ZMK, Zambian Kwacha ZMW, New Zambian Kwacha